Nanao Fitokonana Tsy Nihinan-kanina Ny Bilaogera Roa Nogadraina Tao Alzeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 5:18 GMT
Ny sarin'ny Filoha Alzeriana 80 taona Abdelaziz Bouteflika, izay nitondra ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1999. Sary: Thierry Ehrmann, natolotry ny Mozea ao Organ
Vao haingana no nanao fitokonana tsy nihinan-kanina ny bilaogera Alzeriana roa mba hanoherana ny fanagadrana azy ireo noho ny fanehoany hevitra tao amin'ny aterineto.
Nigadra nanomboka tamin'ny 18 janoary i Merzoug Touati noho ny antsafa nataony tamin'ilay manamboninahitra Isiraeliana, raha nosamborina tamin'ny 31 Jolay 2016 kosa i Slimane Bouhafs noho ireo lahatsoratra Facebook nolazaina fa “nanafintohina ny finoana Islamo”.
Ny 7 Oktobra, nitatitra ny Reporters Sans Frontieres fa nitokona tsy nihinan-kanina i Touati nanomboka ny 13 Septambra. Naneho ny ahiahiny mikasika ny fahasalaman'ity bilaogera ity ny mpanara-maso momba ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ary nitatitra fa tsy nahafahany namaly ny fanontanian'ny mpitsara mpanao fanadihadiana tamin'ny 3 Oktobra “ny faharefoany”.
Araka ny Amnesty Algeria, nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina i Bouhafs tamin'ny 2 Oktobra.
Merzoug Touati: Nogadraina noho ny fanaovana antsafa
Notànana [mg] vonjimaika i Touati amin'izao fotoana izao noho ny antsafa nataony tamin'i Hassan Kaabia, mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Isiraeliana ho an'ny fampitam-baovao miteny Arabo, ary noho ny famoahana ilay antsafa tao amin'ny YouTube sy ny bilaoginy, Alhogra avy eo.
Voampanga teo ambanin'ny Andininy faha-71 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana izy izay milaza ny sazy hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina ho an'ireo rehetra izay voaheloka ho “mifanakalo hevitra amin'ny manampahefana iray avy amin'ny sampam-pitsikilovana vahiny ka mety hanohintohina ny miaramila na ny sata diplaomatikan'i Alzeria na ny tombontsoany ara-toekarena.” Mety hiatrika dimy taona an-tranomaizina fanampiny izy noho ny” fitarihana hetsi-panoherana mitam-piadiana manohitra ny Fanjakana. “
Nifantoka tamin'ny valintenim-bahoaka momba ny Lalànan'ny Tetibola 2017 ny antsafa, izay nahitana ny fampitomboana ny tombam-bidy, ny hetra, ary ny fihenan'ny fanampiana ara-bola ho an'ny solika. Nisy ny fitokonana sy ny korontana tany amin'ny faritany avaratr'i Bejaia sy tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny firenena rehefa nanomboka nampiharina ny lalàna ny 1 Janoary.
Niampanga ny fahefana vahiny ny minisitra Alzeriana iray ho nitsabaka ny raharaham-pirenena sy noho ny fikarakarana hetsi-panoherana. Tao anatin'ilay antsafa, nanontany an'i Kaabia i Touati mikasika ny fiampangan'ny governemanta Alzeriana. Nandà ny fandraisana anjaran'ny Isiraeliana i Kaabia .
Tao amin'ny blaoginy (izay tsy azon'ny daholobe hidirana amin'izao fotoana izao), nanangom-baovao hatrany ny fitokonana manohitra ny fepetra henjana sy ny hetsi-panoherana momba ny asa i Touati , ary ny fanitsakitsahana ny zo izay ataon'ny manampahefana Alzeriana.
Fantaro ny fiantraikan'ny fitokonana tsy mihinan-kanina ara-batana miaraka amin'ny sary fanazavana eto ambany, izay nataon'ny mpiara-miasa aminay Visualizing Impact.
Slimane Bouhafs: Nogadraina noho ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook
Nitokona tsy nihinan-kanina tamin'ny 2 Oktobra ny bilaogera iray hafa, Slimane Bouhafs, izay manefa sazy an-tranomaizina telo taona amin'izao fotoana izao noho ny “fanafintohinana” ny mpaminany Muhammad sy ny Islamo, araka ny biraon'ny Amnesty Alzeria :
Nolavina ny fangatahana ny famotsorana vonjimaika arahim-pepetra an'i Slimane Bouhafs . Nitokona tsy nihinan-kanina izy nanomboka 2 Oktobra.
Kristiana niova fo i Bouhafs sady mpikatroka miaraka amin'ny Fikambanan'ny Kristiana St. Augustine ao Alzeria izay manohana ny zon'ireo mpivavaka vitsy an'isa ao amin'ny firenena.
Talohan'ny fisamborana azy dia nandefa lahatsoratra matetika momba ny toe-draharahan'ny Kristiana vitsy an'isa Alzeriana tao amin'ny Facebook, ny kaontiny Google+ ary ny bilaoginy manokana izy. Araka ny Amnesty International, mpanohana ny Hetsika ho an'ny Fizakà Tena ao Kabylie (MAK) ihany koa izy, izay vondrona politika mahaleotena mikatsaka ny fizakantenan'ny faritra Berbera avaratra ao Kabylie, toerana mafana isian'ny hetsi-panoherana ny fanilikilihana ny Amazighs Alzeriana, ny kolontsain'izy ireo sy ny fiteniny.
Nahitana sariitatra iray avy amin'ny gazetiboky mpanesoeso Frantsay Charlie Hebdo izay mampiseho ny mpaminany Muhammad mitomany ny iray amin'ireo lahatsoratra izay notanisaina ho porofo hanenjehana azy. Ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra, nanoratra i Bouhafs fa “very i Muhammad” tao Kabylie sy Alzeria, ary “hanjavona ny laingany satria eto ny fahazavan'i Kristy.”
Natao fahirano ny fampitam-baovao ao Alzeria
Natao fahirano ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Alzeria. Laharana faha 134 ny firenena ao amin'ny Tondron'ny Fahalalahan'ny Asa fanaovan-gazety Manerantany taona 2017. Miatrika fanenjehana heloka bevava raha mihoa-pefy ireo bilaogera sy mpanao gazety , anisan'izany ny fanakianana ny filoha mijaly ara-pahasalamana Abdelaziz Bouteflika izay nitondra ny firenena nanomboka ny taona 1999, ny kolikoly, ny fivavahana ary ny fitsikerana ny polisy sy ny fitsarana.
Tamin'ny 11 desambra 2016, maty tao amin'ny hopitaly iray tao an-drenivohitra Algers ilay bilaogera Mohamad Tamalt . Nigadra roa taona an-tranomaizina i Tamalt noho ny famoahana tononkalo sy lahatsary iray tao amin'ny Facebook izay nahitana fanehoan-kevitra izay heverina ho manakiana an'i Bouteflika. Ho fanoherana izany dia nitokona tsy nihinan-kanina izy tamin'ny faran'ny volana Jona 2016. Nanomboka tsy nahatsiaro tena intsony izy roa volana taorian'ny nanombohany ny fitokonany tsy nihinan-kanina.
Amin'izao fotoana, atahorana ny ain'ireo bilaogera roa hafa , satria tsy nihinan-kanina izy ireo mba hahazoany ny fahafahana. Hihaino sy hanafoana ny famoretana ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ve ny governemanta Alzeriana raha mbola tsy tara loatra izany?